OnePlus weghachitere ajụjụ ya na ngalaba azịza ya ọzọ enwere obi abụọ | Gam akporosis
OnePlus gụgharịrị ajụjụ na azịza ya ọzọ site na iji ajụjụ ndị ọhụrụ edozi
OnePlus, site na nnọkọ ya, ebipụtala usoro ọhụụ nke nwere azịza ha dị iche iche iji dokwuo anya ọtụtụ isi obi abụọ nke ndị ọrụ.
Nke a ka o mere ugboro ugboro n'oge gara aga. Ugbu a, onye na-emepụta ihe na China, nwere ihe karịrị okwu 10, na-ezube ịkọwapụta atụmatụ ya n'ọdịnihu na ụfọdụ ihe ndị ọzọ.
OnePlus na-edozi obi abụọ ọhụụ
Ndị a bụ ajụjụ na azịza nke OnePlus zigara:
Ajụjụ: Olee mgbe gam akporo 10 ga-adị na usoro OnePlus 5 na 5T?
R: Anyị ewepụtala ụdị Beta Open maka OnePlus 5 na 5T. Nwere ike ibudata ma wụnye melite site na OBT post na Community site na nke anjikọNọrọ na-ege ntị maka ọkwa ndị ọzọ.
Ajụjụ: Kedu mgbe a ga-ewepụta ụlọ ọhụrụ Open Beta na usoro OnePlus 7 na 7T?
R: Anyị na - eji nwayọ nwayọ ebugharị usoro Beta kacha ọhụrụ nke usoro OnePlus 7 na 7T. Anyị ga-ebuga ya ndị ọrụ beta niile mepere emepe ụbọchị ole na ole. Daalụ maka ndidi gị.
Ajụjụ: usersfọdụ ndị ọrụ ekwuola na enwere ike ịrụ ọrụ arụmọrụ na ntanetị ọtụtụ ọrụ.
R: Anyị ejikọgo ọnụ na ntanetị iji gbanwee ngwa ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọ dị na ọkwa Beta nke Storelọ Ahịa Play ma a ga-ahapụ ya na ụbọchị ole na ole.
Q: Kedu ụdị mmelite ndị m ga-atụ anya na ọnọdụ gbara ọchịchịrị?
R: Iji mee ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịrụ ọrụ Ọnọdụ Ọchịchịrị site na ịpị otu Pịa, anyị na-eme atụmatụ ịgbakwunye Ọnọdụ Gbara Ọchịchịrị na Ntọala Ndenye. Ọ ga-enwe nnwale dị n'ime tupu ịbubata ụdị Open Beta na ndị ọrụ sara mbara. A na-ahazi emelite atụmatụ a maka ule dị n'ime ọnwa a.
Ajụjụ: Na nhazi olu, olu nke dị ala karịa ka dị elu.
R: Anyị emeela mgbanwe n'ozuzu na olu ahụ, gụnyere ịgbada olu dị ala na ọkwa kachasị ala, na-achọpụta usoro nke mbụ ọkwa ise nke mgbanwe olu, yana ịme mgbanwe dabere na nzaghachi sitere na ụdị ndị gara aga. Emelitere mmelite a n'ime ụdị Open Beta nke ọnwa a.
Ajụjụ: Mgbe emelite OnePlus Launcher, enwere oge mgbe ị na-eji ngwa ahụ / Aha n'okpuru akara ngosi ahụ wepụrụ / Mgbe emesịrị mbipute kachasị ọhụrụ, ngwa mmemme mmalite ngwa ngwa ma ọ bụ tụlee okpokolo agba.
R: E edozila nsogbu ndị a kpọtụrụ aha na OnePlus Launcher kacha ọhụrụ, biko melite ngwa ahụ na Storelọ Ahịa Play.
Ajụjụ: Gini mere “ekwentị ọhụrụ” ji ekpo ọkụ mgbe ị na-eji OnePlus Switch?
R: N'oge usoro mbufe ahụ, "ekwentị ọhụrụ" ma ọ bụ onye nata ga-arụ ọrụ mgbake data ma wụnye ngwanrọ dị mkpa n'otu oge mgbe ị na-enweta data ahụ. Anyị nwere ike ịtụ anya na ọnọdụ okpomọkụ na-ebili na oke nkịtị na-emebi ọrụ ọ bụla. Ọ bụ nkịtị ka okpomọkụ na-ebili obere.
Ajụjụ: Site na nchekwa batrị enyere na usoro OnePlus 8, mgbe ị na-eji igodo ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ, akara ngosi mgbe ụfọdụ nwere ike ịda mbà.
R: Na ọnọdụ nchekwa batrị, ọ bụrụ na ihuenyo ahụ agbanyụ, ngwaọrụ ahụ ga-agbanyụ GPS iji chekwaa ike. Iji nọgide na-GPS, anyị nwere ike ikwu na ị na-agbalị:
1. Deactivate Battery Saver, to deactivate: Mwube-Batrị gbanyụọ Batrị nchekwa;
2. Gbanyụọ njikarịcha njikere, iji gbanyụọ: Ntọala-Battery-Battery njikarịcha-Pịa na akuku aka nri aka-Advanced njikarịcha-Gbanyụọ njikarịcha njikere.
Ajụjụ: Gini mere enweghi njikọ intaneti mgbe ị na-ekere òkè na usoro OnePlus 8?
R: Na ntọala nkesa hotspot, "Wi-Fi naanị ịkekọrịta" ma ọ bụ "Naanị ịkekọrịta data ekwentị" nwere ike ịme. Debe ya na "mgbanwe akpaka"; Ntọala-Wi-Fi na Internet-Hotspots na Njikọ ringkekọrịta-Ntọala Ntọala-Họrọ Mgbanwe Onwe-aka.
Ajụjụ: Gini mere na agaghị m eleghara ozi melite ngwa?
R: Akpaka update n'elu Wi-Fi bụ ndabara gam akporo ọnọdụ ọ bụla gam akporo ngwa. Iji kwụsị ọkwa ndị a, gaa na nchịkọta nhọrọ menu Google Play hamburger ma gbanwee ntọala ahụ na "Nwelite ngwa akpaaka".
Ajụjụ: Gịnị ka m nwere ike iji Alexa mee na usoro Alexa OnePlus 8 mbanye?
R: Enwere ike iji Alexa rụọ ọtụtụ ihe, dị ka:
1. Kpọọ egwu, gee akwụkwọ ọgụgụ, ma pọdkastị iyi
2. Kpọọ oku, lelee ihu igwe, setịpụ oge, ma tinye ihe na ndetu gị
3. Intelligent olu akara dakọtara smart n'ụlọ ngwaọrụ remotely
Ajụjụ: Kedu asụsụ ndị Alexa na-akwado na ekwentị OnePlus 8 m wuru na ekwentị ekwentị?
R: Alexa dị na US English, Indian English, British English, Spanish Spanish, French, Italian, na German. Iji gbanwee asụsụ nke Alexa zara, gaa na Ntọala ekwentị> chọta Asụsụ> Asụsụ & ntinye> họrọ asụsụ achọrọ. Agbanyeghị, buru n'uche na nke a ga-agbanwe asụsụ nke ekwentị gị.
Ajụjụ: Emechara m ntọala na ekwentị OnePlus 8, mana Alexa anaghị aza ma ọ bụ nzaghachi ya adịghị nwayọ. Kedu ihe m nwere ike ịme?
R: Njikọ netwọk data na-adịghị mma nwere ike imetụta nzaghachi nke Alexa. Jide n'aka na ekwentị gị ejikọrọ na njikọ intaneti ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị mezue ọzụzụ olu na gburugburu ebe mkpọtụ, Alexa Aka-Free nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na Alexa anaghị arụ ọrụ mgbe niile, gbalịa ihichapụ ọzụzụ olu gị dị ugbu a wee zụlite olu gị ọzọ. Jide n'aka na ị na-eme ọzụzụ olu ọhụrụ na gburugburu ebe dị jụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus gụgharịrị ajụjụ na azịza ya ọzọ site na iji ajụjụ ndị ọhụrụ edozi
MIUI 12 ji ozi ọma na ọdịdị dị egwu abịa
Nokia 5.1 Plus na-enweta mmelite gam akporo 10